२४ साउन । बालबालीकाको पहिलो पाठशाला घर र दोस्रो पाठशाला विद्यालय हो ।
घरमा अभिभाबक वा परिवारका सदस्यले गर्ने क्रियाकलाप बालबालीकाले आफ्नो व्यबहारमा देखाउने गर्दछन् । विद्यालयमा सिकेका कुरालाई नै बालबालीकाले बढी विश्वास गर्छन ।
साना बालबालीकालाई सिकाईमा कसरी जोड्न सकिन्छ ? सुरुमा उनीहरुलाई के सिकाउने ? भन्ने विषयमा लोटस मन्टेश्वरीका सञ्चालक कृष्णा शाहिसंग सेरोफेरो संवाददाता सीता वलीले गरेको कुराकानी :
बालबालीकालाई हामीहरु उमेर अनुसार हेर्ने गर्दछौं । साना बच्चाहरुलाई खेल्ने, श्रव्यदृश्य, शारिरीक व्यायम लगाएतका कुराबाट सिकाई हुने गर्दछ ।
दुई देखी साढे दुई वर्षसम्मका बच्चाहरुलाई ल्याब प्रविधिबाट सिकाउछौं । हामी बच्चालाई सिधै पढ्न सिकाउंदैनौ । उनीहरुलाई शुरुमा घरमा विहानदेखी गरेका क्रियाकलापहरु सम्झेर भन्न लगाउछौं । योगा लगाएतका क्रियाकलाप गराएर खेल्दै सिक्दैको वातावरण तय गर्दर्छौ ।
बच्चाहरुलाई पढ्न मन लगाउनको लागी उनीहरुको मनोभावना बुझ्नु आवश्यक छ । संगसंगै योगा, ध्यान गराएर विस्तारै पढाईमा मन लाग्ने बनाउन सकिन्छ । निजी विद्यालय जस्तो भारी किताब र धेरै गृहकार्यले बालबालीकाको मनोवल घट्छ ।
हामी बालबालीकालाई कहिल्यै बोझ बोकाउँदैनौ । उनीहरुलाई पढाईप्रती आफै उत्प्रेरित गर्दर्छौ ।
नैतिक शिक्षा नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । हामी बालबालीकालाई सैद्धान्तिक ज्ञान भन्दा पनि व्यवहारिक बनाउँछौं । बालबालीकालाई सक्षम बनाउनु हाम्रँे मुख्य लक्ष्य हो । हामी संस्कृती भुल्न दिंदैनौ । विभिन्न चार्डपर्वहरु समेत बालबालीकाहरुले मनाउन पाउँछन् ।
बालबालीकालाई भोली गएर असल नागरिक बनाउनको लागी त आजैदेखी नैतीक शिक्षा आवश्यक छ । कुलतबाट सबैभन्दा टाढा राख्नुपर्दछ । त्यसको लागी अभिभावक, विद्यालय र बालबालीकालको त्रीकोणात्मक सम्बन्ध हुनुपर्दछ ।
कर्तव्य पालना गर्ने गराउने कुरामा शिक्षकको समेत महत्वपुर्ण भूमिका हुन्छ । बच्चालाई एउटै वातावारणमा कहिल्यै हुर्काउनु हुंदैन । उनीहरुलाई देखाएर मात्रै हुदैन आँफै स्पर्श गर्ने वातावरण दिनुपर्दछ ।
आजभोलीका बालबालीकाहरु दुध कहाँबाट आउँछ भन्दा डेरीबाट भन्छन् तर भैंसीले दुध दिन्छ भन्ने थाहा पाउंदैनन् । त्यसको लागी भैंसी दुहुन लागेको वातावरणा लैजान सक्ने हुनुपर्छ ।
अन्तमा बालबालीकालाई होमवर्कमा मात्रै ध्यान दिने प्रवृत्तिलाई कम गरी व्यवहारिक र सैद्धान्तिक ज्ञानमा आम अभिभावकले ध्यान दिन जरुरी छ ।